चाडपर्वमा दाँत तथा मुखको स्याहार कसरी गर्ने ? | | Nepali Health
चाडपर्वमा दाँत तथा मुखको स्याहार कसरी गर्ने ?
२०७७ कार्तिक ९ गते ८:२२ मा प्रकाशित
– डा. पुस्कर काफ्ले
नेपाल तथा विश्वमै चाडपर्वको बेला मासु तथा खानाका विविध परिकारहरु तयार गरी सामान्यतया खाने प्रचलन रहिआएको छ । नेपालमा पनि चाडपर्व भित्रिदाँ खानाका विविध परिकार खाने सौखिन नेपालीको जमात बढ्दो छ ।
विशेषगरी नेपालीको महान पर्व दशैंमा मुख्य खानाको रुपमा मासुका परिकारहरुलाई लिइने गरिन्छ । फूलपाती देखी कोजाग्रत पूर्णिमा सम्म १ हप्ताको छोटो समयमा सामान्य दिनहरुमा भन्दा बढी नै मानिसहरु मासुका परिकारहरु खाने गर्दछन् ।जुन परिकारलाई चपाउन दाँतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
पर्वहरुमा धेरै बढि पोलेका मासुका परिकारहरु, धुम्रपान, मद्यपान साथसाथै एकैपटक लगातार खाइरहँदा दाँत, मुख तथा गिजा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढि शिथिल तथा सुख्खा बन्न जान्छन् ।
प्रायः नेपाली जनमानसमा दाँत तथा मुखको हेरचाह सम्बन्धि सामान्य जानकारी पनि थाहा नभएको हामी पाउन्छौ । दाँतमा लामो समयसम्म रेशादार विशेषत् पोलेका तथा सेकुवाको रुपमा खाइने मासुका परिकार राम्रोसँग नपाक्दा एक किसिमले कोच्चिएर दुई दाँतको बिचमा रहिरहने अवस्था पनि धेरै पीडादायीक हुन्छ ।
मासु तथा खाना लामो समय अड्किरहदाँ त्यसले एक किसिमको एसिड (अम्ल) पैदा गर्ने गर्दछ । सो एसिडले दाँतमा क्याल्सियमलाई गलाइदिने र दाँतमा एक किसिमको झन्झनावट पैदा गरिदिन्छ । अझ यो समस्या लामो समयसम्म भैदिदाँ दाँतको पीडा बढ्दै गई दाँत नै उखाल्नु पर्ने परिस्थिती निम्तिन सक्छ ।
समस्याबाट बच्न के गर्ने ?
१) मासुका परिकारलाई राम्रोसँग पकाएर तथा गलाएर मात्र खाने ।
२) यदि खाने कुरा अड्की हालेमा त्यसलाई तुरुन्तै निकाल्नको लागी एक किसिमको धागो (डेण्टल फ्लस) को सहायता लिने ।
३) दशैंमा धेरै नै टुथ पिकको प्रयोग हुने हुदाँ त्यसले गिजा तथा दाँतमा समस्या निम्त्याउने । सकभर त्यसको प्रयोग नगर्ने ।
४) धेरै तातो खानेकुराले मुख भित्रका नरम छालाहरुमा असर गर्ने भएकोले सेलाएर मात्र खाने ।
५) चाडपर्वको बेला धेरै मात्रामा धुम्रपान, मद्यपान सेवन गर्दा मुख सुख्खा हुने हुदाँ झोलिलो तथा पानीको अधिक प्रयोग गर्ने ।
६) चिसो पेय पदार्थमा एसिडको मात्रा हुने हुनाले त्यसको प्रयोगमा कमी ल्याउने ।
७) रातीको खानापछी सधै ब्रस गर्ने र दिउँसोको हल्का खानापछी कुल्ला गर्ने ।
८) ६/६ महिनामा दाँत तथा मुखको नियमित परिक्षण गराउने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा थप ८२२ जनामा कोरोना संक्रमण
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १७०३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, १२३६ जना संक्रमणमुक्त
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कोरोना संक्रमण
परिस्थितिको बाध्यता अनुरुप चाडपर्व मनाउन स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आग्रह